Homecraft - မူလစာမျက်နှာဒီဇိုင်းဂိမ်း Android အတွက်ဒေါင်းလုပ်ပြုလုပ်ပါ
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » Homecraft - ပင်မစာမျက်နှာဒီဇိုင်းဂိမ်း
Homecraft - ပင်မစာမျက်နှာဒီဇိုင်းဂိမ်း APK ကို
ဒါကြောင့်သင့်ကိုယ်ပိုင် run ဖို့ကဲ့သို့ခံစားရသောအရာကိုသိရန်အစဉ်အဆက်လိုချင် အတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်း စတူဒီယို? ယခုတွင်သင်သည် TapBlaze ရဲ့နောက်ဆုံးပေါ်နှင့်အတူတတ်နိုင်သမျှ နေအိမ်ဒီဇိုင်း ဂိမ်း, Homecraft! သင့်ရဲ့အတွင်းပိုင်းအလှဆင်ပင်ကိုယ်မှစစ်မှန်တဲ့တည်းခိုနေစဉ်သင့်ရဲ့ client ကိုရဲ့ဒီဇိုင်းတောင်းဆိုမှုကိုကျေနပ်ရန်သင့်ကိုအကောင်းဆုံးလုပ်ပါ။ သင့်ရဲ့ရပ်ကွက်အတွင်း၏မာစတာ homecrafter ဖြစ်လာ ... သင့်ရဲ့မြို့ ... သင့်ရဲ့တိုင်းပြည် ... သင့်ရဲ့ကမ္ဘာကြီးကို!
သင့် client သူတို့ရဲ့ဖန်တီးကူညီပေးဖို့ပွဲစဉ်3ပဟေဠိအဆင့်ဆင့်ဖြေရှင်းနှင့်အသစ်ပုံစံမျိုးပစ္စည်းများရာပေါင်းများစွာသော့ဖွင့် အိမ်မှာအိပ်မက်မက်! နောက်ဆုံးဒီဇိုင်းကိုလုံးဝကိုသင်မှတက်ပါ!
🔥မူလစာမျက်နှာဒီဇိုင်း🛏ခြင်း simulation ပွဲစဉ်3ပဟေဠိစိန်ခေါ်မှုများနှင့်အတူ
🔥ထူးခြားသောနေအိမ်များ🏡နှင့် client များ
သင်တစ်ဦးအတွင်းပိုင်းအလှဆင်အဖြစ်သင့်ဒီဇိုင်းကျွမ်းကျင်မှု polish အဖြစ်🔥ဆုလာဘ် Unlock
အဆိုပါအလှဆင်တာဝန်ကျတဲ့အပေါ်ကိုယူသွားပါ! ပရိဘောဂများနှင့်အလှဆင်အမျိုးမျိုးနှင့်အတူသင့် client '' အခန်းပေါင်းစိတ်ကြိုက်ပွဲပဟေဠိထံမှဒင်္ဂါးပြားဝင်ငွေ။ အိမ်မှာသူတို့ရဲ့အိပ်မက်ဟာလက်တွေ့လုပ်သင့်ကိုယ်ပိုင်ဒီဇိုင်းစတိုင်ကိုသုံးပါ။
Download များနှင့်ယခု homecrafting start!
နေအိမ်ဒီဇိုင်းဖြစ်ရပ်များတွင်ပါဝင်ရန် Facebook ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပန်ကာစာမျက်နှာ Follow နှင့်နောက်ဆုံးပေါ်သတင်းရ!
အားလုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ Homecrafters ရန်သင့်အားကျေးဇူးတင်ပါသည် ငါတို့သည်သင်တို့အဘို့အဂိမ်းတိုးတက်အောင်အလုပ်မှာခက်ခဲခဲ့ကြပြီးဒီဗားရှင်းကိုအောက်ပါတို့ပါဝင်သည်:
* နယူးပွဲ - Tree ထိပ်တန်းဘန်ဂလို!
သင်သည်မည်သည့်အတွေးအခေါ်များသို့မဟုတ်အကြံပြုချက်များရှိပါက homecraft@tapblaze.com အီးမေးလ်ပေးပို့ပါ
Homecraft - ပင်မစာမျက်နှာဒီဇိုင်းဂိမ်း
58.35 ကို MB
အကြှနျုပျ၏မူလစာမျက်နှာ - ဒီဇိုင်းအိပ်မက်များ